Kylin Li dia nilaza fa tena tia ny mahafinaritra amin'ny sary hosodoko nomerika | Famoronana an-tserasera
Mpanakanto nomerika izay milaza ho fitiavana lehibe ho an'ny Photoshop ary ireo sary niomerika izay mametraka antsika alohan'ny biby nofinofy toy ilay mikasika antsika eo an-doha miaraka amin'ilay unicorn misy elatra.
Kylin Li dia mety ho hita lavorary eo amin'ny fonony amin'ireo lalao video rehetra ireo console sy PC izay handalovan'ireo mpiady, biby goavam-be ary karazana endri-tsoratra eo imasonay mba hamporisika antsika hiditra amin'ireo tontolo nofinofy sy medieval. Li dia mpanao sary nomerika izay manana sanganasa marobe manana kalitao goavambe ary noho izany antony izany dia nandalo ireo andalana ireo izahay mba hampisehoana ny ampahan'izy ireo.
Mpandoko sary monina any Beijing, Sina ary izay amin'ny ankamaroan'ny sanganasany dia mitondra antsika alohan'ny dragona maizina, mpiady izay afaka mivoaka avy amin'ny tontolo Warcraft na ilay unicorn misy elatra toa latsaka avy eny amin'ny lanitra ihany.
Paleta miloko izay mety ho hitantsika ao amin'ny fanoharana nataon'i Ben Thompson ihany, iray amin'ireo mpanao sary an-tsary an'i Blizzard izay namolavola biby goavambe sy olo-malaza marobe toa an'i Diablo tenany.
Li dia manana asa miavaka hafa horaisiny ho antsika talohan'izay endri-tsoratra vavy tahaka ny amin'ny «ranomaso» izay asehon'ny mpanjakavavy elf ny mamy sy ny paozy mangatsiaka. Andiam-sangan'asa manana kalitao avo indrindra izay hozaraiko zaraina avy amin'ireto andalana ireto, saingy mamporisika anao handalo aho ho an'ny Artstation anao.
Tato ho ato isika dia nanana ohatra hafa mahaliana amin'ny sary hosodoko nomerika toa Tafio-drivotra, Elena Sai sy ireo tovovavy mampatahotra azy o Kare Huan sy ny «Saribakoly». Sary nomerika hitantsika hoe tsara sy tsara kokoa asa izay manamorona ny kalitao mahatalanjona ary matetika isika dia tsy mandalo ireo anarana be loatra amin'izao fotoana izao amin'ity sary ity. Thompson dia nilaza fa ho tonga amin'ny asany tsy ho ela isika handinika ireo sary noforonina ho an'i Hearthstone.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fanoharana nomerika an'i Kylin Li